Kunze Kwema Multi-Function Solar LED Emergency Flashlight Radio China Manufacturer
Tsanangudzo:Multiple Mitsara Yokubhadhara,Two Band Radio,Ne Flash Warning
Multiple Mitsara Yokubhadhara,Two Band Radio,Ne Flash Warning
Home > Products > Solar Speaker System > Solar Lighting Loudspeaker Box > Kunze Kwema Multi-Function Solar LED Emergency Flashlight Radio
Iyi iri kunze kwema multi-functional solar LED flashlight emergency light, uye ine basa reredhiyo. Inotsigira maitiro akawanda ekubhadhara , ayo anogona kutengeswa nesimba rezuva. Mvura inonaya, inogona kushandiswawo kugadzira magetsi emuviri nemaoko. Pasi pemamiriro ezvinhu, zvinogonawo kutongwa nekunze kwemasimba. Usafunganya nezvekubuda kunze kwegesi. Zvitsva zvitatu zvakasvibirira zvinopenya zvinopenya LED AM / FM mapaviri maviri-mafirimu . Iyo ine flash warning, kufamba kunze kana kudzika musasa. Kana zviitiko zvekukurumidzira, tangai mhepo inonyevera basa kukumbira rubatsiro.
Tora kweminiti, kumira kwemaminetsi makumi maviri nemashanu, redhiyo kwemaminitsi matanhatu, maawaira kwemaminitsi makumi matatu, foni kwemaminitsi makumi maviri nemakumi mana nemirairo gumi nemaminitsi gumi nemakumi maviri.
Shandisa magetsi redhiyo, rinogadzirisa hurongwa, inovhura, yakanaka, yakagadzikana, inoshanda, kumba uye kunze kwekufambira inokosha. Inokwanisa kugadzira magetsi nemazuva emhepo kana nesimba re mechanical. Iine chimiro chaicho uye yakakosha. Kushandisa kubuda kwema LED yakajeka sechiedza, chiedza chiri chechisiki uye chinononoka, nehupenyu hwemaawa anopfuura gumi nemazana gumi uye huwandu hwakawanda uye simba rekuchengetedza. Tora purogiramu inoshanda, kufamba kunze kana kudzika musasa, kukurumidzira ndeye, ndiyo yako yekubatsira kwekukurumidza. Radiyo inoshanda uye inobatsira, inonzwika uye yakajeka. Pasi pechiedza chakasimba chinotengesa maawa masere, chinogona kuvhenekera kwemaawa gumi kana zvakadaro, ruoko runoda miniti 1, torchi inogona kushandiswa nguva dzose inopfuura maminitsi gumi.
New Solar Radio Cassette Nekuona Nemazwi Ekutaura
Multiple Mitsara Yokubhadhara
Ne Flash Warning
Customizable Solar Speakers